5 Abalawuli ababenqatshelwe ukwenza izinto
I-Hollywood icace ngobuqhetseba malunga nokwenza iifayile kwiimpilimu ezininzi eziyimpumelelo kwaye abadlali abaninzi bavame ukubona i-sequels njenge-payday elula. Nangona kunjalo, abalandeli bahlala bexhalabisa ukuba i-sequel engafanelekanga kwaye ngezinye izihlandlo ingabalulekanga " inokutshabalalisa " i-movie yokuqala eyayithanda kakhulu. Okumangalisa kukuba, ayisoloko ehlala yedwa kwimvakalelo. Nangona iHollywood iyidolophu eqhutyelwa ibhokisi yeempumelelo yeofisi, kukho iziganeko ezimbalwa apho abaqondisi abazange banqwenele ukwenza iifayile kwiimpumelelo zabo, kodwa, ngamanye amaxesha, baye bavalela iinzame zee-studio ukuba zenze umququzeleli nabani na enye.
UWalt Disney - 'I-Snow White Return'
Ngama-1990, i-Disney yavelisa amaninzi amaninzi ngokubhekiselele kwii-classical. Nangona bathengise kakuhle, abaninzi abalandeli baziva ukuba iziganeko ezingenakwenza ubulungisa kwimvelaphi. Enye yeemafilimu ambalwa awaziwa yiDisney akazange enze enye inkqubela yeyona nto yenkampani yokuqala, i- Snow White kunye ne-Seven Outwar . Abafaki bacinga ukuba oku kungenakuhlonela umsunguli weWalt Disney.
Enyanisweni, kungekudala emva kokukhululwa kwe- Snow White kunye nempumelelo enkulu yebhokisi yeofisi, ii-Disney animators zaqala ukusebenza kwi-cartoon emfutshane ebizwa ngokuba yi- Snow White Returns . Inqutshane icatshulwa njengendlela yokusebenzisa ukulandelelana okunqunywe kwi-movie.
Nangona kunjalo, uWalt Disney wanquma ukungayifaki imfutshane emveliso emva kwayo yonke into. Nangona kwi-2000s Disney yavelisa iingcamango zekhompyuty-animated i- Snow White prequel, kungekudala emva kweGosa eliPhezulu leCandelo likaChristal Lasseter laba yintloko yeDisney Animation, wayichoxisa. I-Disney ayinaso naziphi na izicwangciso zokwenza enye i-movie ephathekayo ye- Snow White .
USteven Spielberg - 'ET ET: Uzoyika ngobusuku'
Emva kwe- ET: I-Terrestrial eyongezelelweyo yaba yifilimu ephakamileyo kakhulu yexesha lonke kwaye yenza izigidi ekuthengiseni, uMlawuli we-Universal ucela uSteven Spielberg ukuba abe nomnye umntu. Nangona kunjalo, ngaphandle kwe- Indiana Jones kunye ne- Jurassic Park uchungechunge lwefilimu, uSpielberg uye wahlula ukwenza ukulandelana. Ngokomzekelo, wayengafuni nantoni na iJaws 2 xa i-Universal ivelisa ifilimu kwiminyaka embalwa ngaphambili.
Umlobi we-Spielberg kunye ne- ET uMelissa Mathison wabhala unyango lwe- ET II ebizwa nge- ET II: Ukwesaba ngobusuku . Ngokukrakra, i-sequel iyi-movie eyoyikisayo ngo-Elliot kunye nabahlobo bakhe bathatyathwa baze bathuthunyiswe ngabafokazi ababi abaya kuba neendlela zokubambisana nabantwana abangabodwa ababukeleyo. Ngaphezulu, i-ET yayingayi kubakho kwi-movie.
Kuye kwaxelwa ukuba i-Spielberg kunye ne-Mathison babhale unyango olungenakulungiswayo ukuze i-Universal iyeke ukucela enye inkqubela, kodwa kubonakala ngathi uSpielberg wayicinga ukuba enze i- ET II . Ngombulelo akazange, kwaye ukususela ngaloo ndlela, uye walasela nayiphi na injongo yokwenza i- ET sequel nangona kungakanani imali enokuyenza.
Abazalwana beCoen - 'I-Big Lebowski 2'
Abafana bakaJeff Bridges abathandekayo abathandekayo U-Dude wamangaliswa xa uTara Reid, owayenendima encinci kwi -Big Lebowski , ebhengeze kwi-casti ebomvu ngonyaka ka-2011 ukuba i-classic ye-1998 yayisendleleni. Xa ebuzwa ukuba aphendule, amaBridges ayengazi ukuba kwenzeke (nangona wayemkele ingcamango). Ngokukhawuleza iiCaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzini, kwaye uReid wayithi wayedidekile. Wagqiba ukukrazula ngephutha lakhe ngokwenza ividiyo ye-Funny okanye i-Die apho "wenza" udlala nayo yonke indima.
Ngoxa abazalwana beCoen babenomdla wokubhala ibhayisikobho ye-spinoff ye-movie ye-John Turturro ka-Jesus Quintana udidi oluvela kwi-movie, akukho nto yavela kule ngcamango. Nanini na xa bebuzwa, ii Coens ziyaqhubeka zivakalisa ukuba aziyi kwenza iqhosha elikhulu leLebowski kungakhathaliseki ukuba abalandeli balahlekelwa yi-Dude.
URobert Zemeckis - 'Ukubuyela Kwixesha Elizayo Kwingxenye IV'
Ngomhla wokuba ngu-2015 ube ngumnyaka wemashumi amathathu wokubuyisela kwiKamva kunye nomnyaka wokubuyela kwixesha elizayo, iSahluko II sisetyenziswe, abanye abalandeli bazibuza ukuba umlawuli uRobert Zemeckis uceba ukuqhubela phambili kwiintlanzi ezinkulu zikaMarty McFly okanye ngenxa yempilo kaMichael J. Fox imiba, ukuvumela ukuba kwenziwe i-remake.
Nangona kunjalo, indlela kuphela yecala le-4 eliya kwi- Movie okanye kwi-Future remake lingenzeka ngaphezu kwegazi likaZemeckis - ngokwenene. UZemeckis ubambisana namalungelo kwi-franchise kunye no- Back to Future co-author Bob Gale, kwaye watshela iThe Telegraph ukuba akayi kuvumela nayiphi na i- sequels okanye iyakwenza ukuba yenzeke ebomini bakhe. Ngokwengxenye yakhe, uGale akanalo umdla ekwenzeni ifilimu yesine okanye, kodwa akanikanga "kungekhona ngaphambi kokuba ndifile!" I-ultimatum kumgangatho ofanayo noZemeckis.
UFrancis Ford Coppola - 'I-Godfather Part IV'
UFrancis Ford Coppola ulandelelanisa iifilimu ezintathu ezisekelwe kumdlalo wenkohlakalo kaMafia Puzo U- Godfather , kunye noPuzo ubhala ngokubhala zonke izinto ezintathu ezibonisa iCoppola. Nangona i-movie yesithathu ithathwa njengento engaphantsi kwezinto ezimbini zokuqala, abalandeli abaninzi bazimisele ukunika iCoppola enye ibhentshi kunye nefilimu yesine exelela i-saga yentsapho yaseCorleone yolwaphulo-mthetho.
UCoppola wayevulekele ingcamango kwaye uPuzo waqala ukusebenza kwi-screenplay. Kodwa xa uPozo efa ngo-1999, uCoppola wadlulisela imbono yokwenza i-movie ye-Godfather yesine. Nangona inxalenye yesikrini sePozo esingasetyenziswanga satshintshilwa yinto enomxholo I-Family Corleone ngumlobi uEd Falco ngo-2012, uCoppola wenqabile ukubandakanyeka neParamount ukwenza enye inzala ye-Godfather. Kuvela iParamount igcina yenza iCoppola inokuthi ayivumele.
Ngubani obethelelayo kwi-'Thengi 'yeTravel Soundtrack?
'2 Ukukhawuleza 2 Ulaka' - UPawulos Walker noTyrese Interview